I-Semalt iphakamisa izilinganiso ezingu-5 zeThuluzi Lokungena Ngesithombe
Ithuluzi lokukhipha isithombe lisiza ukudala uhlu lwezithombe ezitholakala kwiwebhusayithi ekhethiwe. Ungasebenzisa leli thuluzi ukuze ukhiphe izithombe bese uyithumela kwifomethi ye-JSON. Leli thuluzi liqukethe isikhombikubona somsebenzisi futhi kulula ukuyisebenzisa. Kumele ufake i-URL yewebhusayithi ofuna ukuhlaziya futhi ishaye inkinobho ethi "Thumela". Ithuluzi lesitoreji lesithombe ngokushesha lithola okuqukethwe futhi lwenze imiphumela oyifunayo - genuine suede leather. Ezinye zezinguqulo zayo zakamuva zibalulwe ngezansi.
I-ExtractPDF isiza amadokhumenti e-PDF futhi ayihlukanise ngezigaba ezihlukile: izithombe, umbhalo, amafonti, nemethadatha. Ungahlola amawebhusayithi amaningi njengoba ufuna ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Kufanele nje ufake i-URL bese uvumela i-ExtractPDF ukuba ilandise idatha yayo
I-Konwerter yinye isitoreji esikhulu somfanekiso esenza izithombe zakho namafayela e-Word kalula. Leli thuluzi lihle kumabhizinisi nakumabhizinisi. Ungaphula amafayela we-BMP, GIF, JPG ne-PNG usebenzisa leli thuluzi. Kumelwe nje ugcizelele idatha bese ucindezela inkinobho ethi "Khipha" ukuze uqale ukukhipha. Uma i-Konwerter yenziwa ngokukhipha, ungalanda idatha efomethi efiselekayo.
I-SmallPDF ingenye insiza yethuluzi lokukhipha isithombe. It has interface yomsebenzisi-friendly futhi kungaba scrape eziningi izithombe njengoba ufuna. I-SmallPDF ayilangazi nje kuphela amafayela we-JPG ne-PNG kodwa iphinda iqoqe idatha kusuka kumadokhumenti e-PDF. Ungathola idatha efomethi efundekayo futhi ehlelekile futhi ingaveza umzila oningi kwi-intanethi. Uma ufaka i-URL noma ulayishe isithombe, kufanele uchofoze inkinobho ethi "Scrape" bese uvumela leli thuluzi lenze umsebenzi walo.
4. I-PDF Online:
I-PDF Online ingenye yezinguqulo ezinhle kakhulu zesitoreji sesithombe. Ikuthola izithombe eziphakeme kakhulu futhi inqwaba inombolo enkulu yamakhasi ewebhu kalula. Impendulo kuphela ukuthi leli thuluzi lingakwazi ukukhipha izithombe ezintathu ngesikhathi. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuyisebenzisa kumaphrojekthi amaningi futhi kuzodingeka uthenge inguqulo yayo ye-premium. I-PDF ku-intanethi ayidingi ukulandwa futhi ingakwazi ukuphatha imisebenzi yakho yesikhumba sedatha. Loluhlelo olunzulu noluthembekile, olufanele amabhizinisi, abahleli, amakhodi, ochwepheshe be-IT kanye nabaphathi bewebhu.
i-PDFMate ingenye inguqulo enhle kakhulu yesitoreji sesithombe. Okwamanje itholakale kubasebenzisi beWindows kuphela futhi iyaziwa kakhulu nge-interface yayo yomsebenzisi-friendly. Nge-PDFMate, ungakwazi ukufaka izithombe eziningi noma amafayela we-PDF njengoba ufuna. Leli thuluzi libuye lishaye idatha kusuka kumakhasi aphuzi, amakhasi amhlophe, amaforamu okuxoxisana namarekhodi aklayini. Ixosha amafayela we-PNG nama-JPG futhi isofthiwe ethembekile.
Ukuze kusetshenziswe kahle injini yokusesha, zonke izithombe kufanele zikhethe izimfanelo ze-ALT. Izimfanelo zikwazisa i-Google mayelana nezithombe zakho futhi zinikeza umbono wokuthi yiluphi uhlobo lokuqukethwe oshicilelayo. Izinguqulo ezingenhla zethuluzi lesithombe sokukhipha kokubili zithembekile futhi zinembile. Basinika imiphumela efisa futhi asidingi ikhodi. Ungazuza kulolu hlelo lwesofthiwe yesitoreji somuntu ongesiye isimiso.